Izindwangu Zasekhishini, Ithawula Le Microfiber Mesh, Izindwangu Zasekhaya - Hefei Super Trade
Velor Beach ithawula
Ithawula leTerry Beach
Ingubo yokulala enesisindo
Ikhwalithi yokuqala, Ukuphepha kuqinisekisiwe
Elikhulu Round Beach ithawula Ingubo, Circle Thick S ...
Ukotini ongu-100% WOKUTHUTHEKISA NOKWENZA IZINTO ZOKUPHAKATHI - Leli thawula eliyindilinga lenziwe ngo-100% ukotini, amanzi amunca amanzi futhi aqinile.Alinamathele esikhunjeni sakho noma libangele ukungezwani komzimba. Futhi mkhulu futhi uthambile kunamanye amathawula ajwayelekile. UNGAZE UPHELE FUTHI UNGANAMUZI - Ithawula lolwandle licutshungulwa amahlandla ayikhulu emanzini ashisayo nabandayo ukuqinisekisa ikhwalithi yalo. Ithawula alikaze lishabalale, ngenxa yenqubo enhle kakhulu yokudaya. Ngemuva kokucubungula, umbala wayo ukhanya kakhulu futhi imigqa ye-suture ...
100% Ukotini jaquard embossed Ibhishi ithawula, enkulu ...
I-100% Cotton HOTEL NE-SPA QUALITY TOWELS: Yenziwe ngo-100% ukotini wangempela wokunethezeka okuphezulu nokunethezeka. SOFT, ABSORBENT AND DURABLE: Heavyweight, cotton plush inikeza ukuthamba okukhulu, ukumunca nokuqina. NGEMIBUZO EMIHLE, uhlangothi lwangaphambili luyi-velor enhle nge-jaquard enhle noma ngemiklamo ebunjiwe, i-back terry lope enemiklamo efanayo kodwa enemibala ehlukile. UKUNAKEKELA KULULA: Umshini ungagezeka futhi uhlale isikhathi eside. Into Velor jaquard lolwandle ithawula Izinto 100% ukotini Usayizi 75x1 ...
kanokusho Velor 100% Ukotini Beach ithawula. ICabana St ...
I-100% Ukotini OVERSISED BEACH AND TOOLEL TOWELS: Yenziwe ngo-100% ukotini ngokunethezeka okuphezulu nokunethezeka. Kuhle ukukhombisa isitayela sakho sesikhathi sakho seholide olwandle / olwandle / echibini. Uma ubeka okuthile kokuthile Okukhethekile kuwo wonke amathawula waselwandle, lokhu kuyisinqumo esihle. SOFT, ABSORBENT AND DURABLE: Heavyweight, cotton plush inikeza ukuthamba okukhulu, ukumunca nokuqina. UKUNAKEKELA KULULA: Umshini ungagezeka futhi uhlale isikhathi eside. Ubukhulu Nosayizi —- Aveerage Ubukhulu: 400 ...
Microfiber Round Beach ithawula Tropical Beach Bla ...
I-100% i-polyester ehamba phambili ekunakekelweni kwesikhumba: Yenziwe nge-100% microfiber esezingeni eliphakeme iyenza ithambe ngokuphelele esikhunjeni sakho.Eco-friendly, engabuni, engekho iphunga. I-Oversized: ingubo yolwandle eyindingilizi ilingana nabantu abayi-2 ngokukhululeka. Usayizi ophelele wabesifazane / abesilisa aba-2, amantombazane, izingane, abafana ukumunca okukhulu nokumisa okusheshayo: Ithawula leMicrofiber limunca amanzi aphindwe kahlanu kunethawula likakotini. Izinto zokoma ezisheshayo zisebenza kahle njengethawula lolwandle nolokuhamba futhi loma ngokushesha okukhulu. Mu ...
Izingubo zokulala ezinesisindo Zabantu Abadala abane-Glass Ubuhlalu 100% C ...
Umngane Ohlukile Wokulala: I-Weighted Blanket 15lbs ilingisa indlela umzali ashuthe ngayo ingane yakhe ukuze ilale ukuze ikusize uvuke uphumule ngokwengeziwe futhi usesimweni esingcono - Izingubo zokulala ezisindayo, ezaziwa nge- “earthing” noma “grounding”, zisiza ukugxilisa umzimba wakho ngenkathi ikunikeza umuzwa wokugona isithandwa noma abazali. Isikhumbuzi Esihle Nesipho: Khetha ingubo enesisindo ehlala cishe ku-7-12% wesisindo somzimba wakho (xhumana nathi uma ungaqiniseki) - AKUNConyelwe abesifazane abakhulelwe, izingane ...
Ithawula lasekhishini likaTerry elinomngcele onomphetho
La mathawula ekhishi asetshenziselwa ikakhulukazi ikhishi. Leli thawula lasekhishini lidayiwe ngentambo, uhlangothi lwangaphambili luyafana nohlangothi lwasemuva, konke kuluhlaza okwesibhakabhaka futhi kufakwe umucu ekwakhiweni kokuhlolwa, lo mklamo wesheke unemvelaphi enemibala nemivimbo emhlophe. Ukwakheka kwaleli thawula lasekhishini kungu-100% ukotini, ubukhulu bungu-38x60cm, isisindo silinganiselwa ku-240gsm, futhi kunemingcele emihle yemiphetho yemingcele emibili emifushane. Leli thawula lasekhishini liyisiqeshana esisodwa, singakwenza ngama-2pcs ngama-3pcs ngesethi ngayinye futhi. Kuleli khishi ...
Microfiber ukushisa ukudluliswa ephrintiwe ekhishini ithawula
Ithawula ledishi le-Microfiber eliphrintiwe: Kule micu ye-microfiber ephrintiwe yesitsha, kukhona ama-2pcs ngesethi ngayinye noma ama-3pcs ngesethi ngayinye. Kuma-2pcs ngesethi ngayinye, kukhona ithawula le-1pc eliphrintiwe lesitsha nethawula le-1pc lesitsha ngombala oqinile ngomklamo womugqa. Okwe-3pcs kusethi ngayinye, kukhona ama-2pcs ithawula lesitsha eliphrintiwe elifanayo nethawula le-1pc lesitsha ngombala oqinile ngomklamo womugqa. Le microfiber ephrintiwe dish ithawula kuyinto ukushisa ukudluliswa ephrintiwe, lelihambisana okuqinile dish ithawula idayiwe ngombala okuqinile, futhi lo mbala esiqinile is ukumesha omunye colo ukuphrinta ...
Ukotini velor ephrintiwe ekhishini ithawula
Ithawula elilodwa le-velor eliphrintiwe ithawula lasekhishini: Leli thawula lekhishi eliphrintiwe liyi-velor ephrintwe ohlangothini lwangaphambili ne-terry emhlophe ngemuva. Lokhu kuphrinta ohlangothini olungaphambili ukuphrinta i-pigment, umbala nokwakheka kuhle kakhulu. Ukwakheka kwaleli thawula lasekhishini eliphrintiwe kungu-100% kakotini, futhi kuyisiqeshana esisodwa ngokuvamile. Usayizi waleli thawula lasekhishini eliphrintiwe ngu-38x63cm noma u-40x60cm imvamisa, kanti isisindo siyi-250gsm. I engenhla ephrintiwe ekhishini ithawula 1pc futhi t ...
ishidi elifanele kanye nesethi yokulala yeMicrofiber
Umbala Solid Colour Material Microfiber Fabric Type 100% Microfiber WELCOME TO FITTED SHEET: Discover the ultimate in high-end bedding with our silky abushelelezi afakwe amashidi anamaphakethe ajulile! Ishidi elifakwe i-microfiber lilukiwe kusuka kuzinto ezisezingeni eliphakeme futhi libhulashiwe kabili ezinhlangothini zombili ngobumnene bokugcina nokunethezeka. Engasindi, ephefumulayo, futhi epholile uma uthinta, ephaketheni elithambile uketshezi olufakwe usayizi amashidi kuzokwakha isipiliyoni esihle sokulala! SIZE NEMINININGWANE: Ufakwe ...
Amasethi wekhava ye-Duvet ne-pillowcase ne-Microfiber ...
I-Size Queen (90 ″ x90 ″) noma i-King (104 ″ x90 ″) Umbala Solid Colour Material 110GSM Microfiber bedding set Setasurement — Duvet Cover Set full size / Queen Size with Zipper Closed, Soft Comforter Cover Sets Sets 3 Pieces (1 Duvet Cover + 2 Ama-pillowcases), 90 × 90 amayintshi NOMA 104 × 90 amayintshi I-Hard Durable & Soft Touch Material -100% yendwangu ye-microfiber enamathele ukunikela ukuthamba nokuthokomala okwehlukile unyaka wonke lapho usebenzisa. Induduzo yobusuku obuhle ...
amaphijama kakotini wamaphethelo alukiwe
ICOTTON PAJAMAS - Amaphijama asindayo enziwe ngendwangu kakotini engu-100%, okuluhlobo lwezingubo zokulala ezilukiwe zabesifazane. Amaphijama okotini wabesifazane nawo afanele ukugqokwa lapho egeza noma ebhukuda, futhi athambile futhi anethezekile esikhunjeni, enesisindo esincane futhi ahlala isikhathi eside. I-CLASSIC STYLE –Amaphijama okotini wowesifazane onezinkinobho ngaphambili kwehembe, ngakho-ke awukhathazeki ngengubo engasindi eshibilika evulekile ezonikeza ukuphepha okwanele. ISIPHO ESIPHELELE – Amaphijama abesifazane ...
Ingubo yoboya kaSherpa ngengubo yoboya yeFlannel
USherpa uboya bezingubo kanye nengubo yoboya yeflaneli: Uhlangothi oluphindwe kabili Ingubo Yokulala Enobuso Obunobuso Be-Flannel Nobuhlalu I-Sherpa Revers Inikeza Imizwa Ehlukile Yokukhululeka Ukuthuthukisa Ukulala Kwakho Ngolunye Uhlangothi Olubushelelezi Futhi Oluluhlaza Kokunye - Kukulethele Ukuthamba Okufudumele Nokufudumala Okune-220 I-gsm Flannel Fleece Phezulu Kanye no-260 Gsm Sherpa ohlangothini olungemuva lwengubo - Kuboshwe Ndawonye Ne-Decorative Knit-Trim Edging Ukubukeka Okuphakeme. Ingubo yoboya beSherpa enoboya befulaneli Bokulala ...
Isipiliyoni seminyaka engaphezu kwengu-20 ezindwangu zasekhaya.
Ikhwalithi enhle kanye nensizakalo enhle
Isitifiketi se-OEKO, isitifiketi se-BSCI, isitifiketi sephepha le-FSC njalonjalo.
I-EUROPE, i-USA, i-Ningizimu Melika, i-Australia, i-Afrika, iMiddle East, i-Southeast Asia namanye amazwe.
Ake sithathe intuthuko yethu iye ezingeni eliphakeme
UMPHAKATHI WAMABHODI OBUCHWEPHESHE OSEBHUDLA ECHINA!
Umhlinzeki Wamathawula Oyindilinga waseChina! Muva nje amabhishi esihlabathi abelokhu evutha ngamathawula asebhishi futhi abantu abakwazi ukuthola okwanele kuwo. Ukusuka kumathegi we-hash asezinkundleni zokuxhumana kuya kuma-blog kumawebhusayithi wemfashini, la mathawula ayajikeleza futhi uma ngikhuluma iqiniso, akekho okhonondayo. Futhi manje ...
YINI I-MICROFIBER TOWELS?
Amathawula we-Microfiber ashintsha indlela ohlanza ngayo ikhaya lakho nezimoto. Imicu ye-ultra-fine inikela ngezinzuzo eziningi noma ngabe usebenzisa amathawula kanjani. La mathawula we-microfiber amunca, futhi omile ngokushesha azowenza umsebenzi wenziwe! I-oda lamathawula we-microfiber wholesale namuhla. Ayini amathawula we-Microfiber? Yini ngempela ...
Ucwaningo luthola ubhadane lweCovid-19 lunezinguquko ezisheshayo ezimeni zengqondo nasekuthengeni omatilasi
UMkhandlu Wokulala Ongcono uvame ukwenza ucwaningo oluningi lwabathengi ukusiza abakhiqizi bamatilasi kanye nemboni ebanzi yokulala ukuze baphendule kangcono izidingo zabathengi, balindele izitayela ezizayo kanye nemizamo yokukhangisa. Esitolimeni sakamuva socwaningo olunzulu, i-BSC ...
Sizokwandisa futhi siqinise ukubambisana.
Ikheli: Rm 1806 IFC Mansion, No. 18 Meishan Rd, Hefei, China
Umakhala ekhukhwini: 86-13705513238
Umakhala ekhukhwini: 86-13855065210
Umakhala ekhukhwini: 86-13655608618
Ithawula leMicrofiber Pure Color Beach, Ikhathuni Ukuphrinta Beach ithawula, Isikhwama seTape Beach, Velor Solid Beach ithawula, Ntambo Dyed Beach ithawula, I-Disney Ukuphrinta Ibhishi Ithawula,